Maitiro ekuronga Night Shift paMacs kuti iite otomatiki | Ndinobva mac
Iyo Night Shift basa rakauya kuMacs mune iyo macOS Sierra 10.12.4 vhezheni uye inobvumira vashandisi kumisikidza parameter kuitira kuti iyo skrini yebhuruu kuratidzwa kuve kushoma. Mune ino kesi zvinokurudzirwa kuti uishandise husiku, asi munhu wese anogona kuronga kushanda kana kudzikamisa nguva sekuda kwavo.
Mune ino kesi tichaona kuti zviri nyore kwazvo kuronga nguva paMac yedu kuti ishandise iyo Night Shift ine akati wandei sarudzo dziripo. Iyo iyo inoverengeka vashandisi vanofarira zvakanyanya ndiyo iyo isu isu inobvumira otomatiki activation programming kubva pakuvira kwezuva kusvika pakubuda kwezuva, asi iyi inyaya yekuravira uye tinogona kuigadzirisa nemahurongwa akasiyana kana nemawoko.
Mune ino kesi, zvese zvatinofanirwa kuita kuwana zvakananga iyo Sarudzo dzeSystem> Inoratidza mune ino menyu isu tinowana iyo tab Night Shift uye sarudzo dziripo dzinowanikwa. Rangarira kuti basa iri haripindirani nemaprojekita kana terevhizheni dzakabatana nemidziyo.
Iyo Chirongwa inodonhedza menyu inotibvumidza isu kuti tiwedzere izvo sarudzo: Yakabviswa (Handbook), Tsika (kushandisa maawa atinoda) uye Kubva pakuvira kwezuva kusvika pakubuda kwezuva (inova otomatiki). Ipapo isu tine iyo Chinyorwa chemanyore iyo inoita kuti basa riitwe kusvikira zuva rabuda uye nemaoko gadzirisa tembiricha yemuvara nebhawa yatinayo kumagumo, kubva padiki kusvika pakudziya.
Kwedu, kana tichida kushandisa otomatiki modhi uye kwete kuomesa hupenyu hwedu, yakanakisa sarudzo ndeye "Kubva pakuvira kwezuva kusvika pakubuda kwezuva" uye zvinoita kuti zvese zviitwe otomatiki. Mubhuku tinokwanisa zvakare kuwana kubva kune imwecheteyo icon yeNotification Center
kwatinogona kumisa kana kudzima basa iri. Iine zviyero zvemamwe makomputa, saka haazi ese maMac ane chinhu ichi chinowanikwa. Izvi ndizvo akatsigira Mac mhando neNigth Shift:
MacBook (kutanga 2015 kana kuti gare gare)
MacBook Air (pakati pa2012 kana kupfuura)
MacBook Pro (Mid 2012 kana gare gare)
Mac mini (Gare gare 2012 kana gare gare)
iMac (Mangwanani 2012 kana kuti gare gare)
Mac Pro (kunonoka 2013 kana gare gare)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuronga Night Shift paMacs kuti iite otomatiki
Ndine Mac mini (kunonoka 2014) uye iyo Night Shift sarudzo haioneke pamasikirini, ini ndiri pa10.12.5 macOS Sierra.